Maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano ka tirsan Hiiraan oo la kala qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
13th December 2019 Ardaan Yare Af Soomaali, Africa, Somalia 0
Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya ayaa waxaa ay gaareen deegaanka Mareero ee degmada Jawiil,halkaas oo maalma ka hor uu laba maleeshiyo Beeleed ku dhex-marey dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Ciidamada oo ka tirsan qeybta 27aad ayaa waxaa hoggaaminaya Taliyaha guutada shanaad, qeybta 27aad ee xoogga dalka Korneyl Faarax Cali Waasuge (Faarax Kooshin),waxaana la sheegay inay ku guuleysteen inay kala qaadaan Maleeshiyaadkii dagaalamay.
Saraakiisha ka tirsan Ciidamada Millateriga ayaa waxaa ay kulan la qaateen Odayaasha labada Beelood oo qaarkood ka tegay Magaalada Baladweyne,isla markaana Ciidamo ay geeyeen Goobihii lagu dagaalamay ee deegaanka Mareero ee duleedka degmada Jawiil.
Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan iyo kan degmada Jawiil weli kama hadlin dagaalkaas,hayeeshee qaar kamid ah Odayaasha & Waxgaradka degmada Jawiil ay wadeen waan waan lagu xalinaayey dagaalkaas oo ugu dambeyn lagu guuleystay.
Soomaali lagu xir xirey dalka Koonfur Afrika